Fanatanjahantenam-pirenena: Fanehoana Tokana Ny Rehareham-Pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jolay 2017 3:38 GMT
(Fanamarihana: efa nivoaka tamin'ny volana Febroary 2008 ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
Na amin'ny alalan'ny didim-panjakana na ny laza, anisan'ny fanatsarana ny kolontsaina isaky ny firenena rehetra ny fanatanjahantena ao amin'ny firenena. Tonga miaraka mba handray anjara, hijery na hampahery ireo atleta na ekipa ankafiziny ny olona avy amin'ny sarangam-piainana marobe. Jereo ny fanatanjahantena nasionaly tsy manam-paharoa ao Colombia, Japana, Malezia, Indonezia, Qatar ary ny Emirà Arabo Mitambatra.
Tejo Niguateros avy amin'i Luis Perez
Ao Colombia, nampiditra ity lahatsary manaraka ity i ramiroparias [es], manazava ny anjara asan'ny tejo, lalao mitoraka zavatra 2 kg avy eny alavitra ao amin'ny sehatra feno tanimanga mba hahazoana isa mifandray amin'ny faribolana nofaritana ao amin'ny faritra tanimanga ahitana tsipika 4 antsoina hoe “fusible” manodidina azy. Afaka mijery ny lalao ao amin'ity lahatsary navoakan'i yecido ianao.
Ao Japana, Sumo wrestling (tolona) no fanatanjahantenam-pirenena. Sumo dia fanatanjahantena fifandraisana nentim-paharazana sy fomba amam-panao feno izay miezaka manosika ny mpifanandrina ivelan'ny faribolana ny mpitolona na manao izay hikasihan'ny mpifanandrina ny tany amin'ny faladian-tongotra ihany. Mampiseho fifaninanana nandritra ny volana novambra tao Fukuoka, Japana ny lahatsary manaraka avy amin'i purnamabs.
Avy ao Malezia sy Indonesia, manana ny Silat izahay: dihy/ hira an'ady. pssgmswk mizara momba izany.
Ao Qatar sy Emirà Arabo Mitambatra, ny Camel Racing (Fifaninanana Hazakazaka Rameva) dia anisan'ny lovan'izy ireo, ary ankehitriny, novelomina indray izany. Taloha, ankizy kely 6 taona no nampiasaina hitaingina rameva noho ny lanja sy ny refin'izy ireo ambany. Amin'izao fotoana izao, ireo milina robot no nampiasaina hitaingina ny rameva, araka ny hitanao ao amin'ity lahatsary navoakan'i qatarvisitor ity.
Raha hijery ireo fanatanjahantenam-pirenena mampiavaka ny firenena hafa: jereo ny oina ao Romania, charreada ao Meksika, ary ny Tifitra Tsipìka Mongoliana.